Ahoana ny manavaka ny hevitra fonosina sy ny soatoavina ? - Dinika forum.serasera.org
Ahoana ny manavaka ny hevitra fonosina sy ny soatoavina ? Lohahevitra : Kolotsaina
Fitohizan'ny hafatra : Ahoana ny manavaka ny hevitra fonosina sy ny soatoavina ?
201007jacky - 03/07/2012 13:33
Indreto misy famaritana sy vinan-kevitra mahakasika izany.
Ny hevitra fonosiny
Ny hevitra ambadik’ilay fitaovana ampiasaina amina fomba amam-panao iray no heverina ho hevitra fonosina.Raha halalinina tsara dia maro ireo fitaovana ampiasaina amina fomba iray , ka ny dikan’ireo fitaovana tsirairay ireo dia mifono hevitra lalina . Fa io fitaovana io dia tsy misolosolo na afaka soloina zavatra hafa fa efa mitampisaka amin’ io fomba io ary raha toa ka tsy ampy ireo fitaovana raikitra ilaina amin’io fomba io dia tsy lavorary na tsy ho azo tanterahina mihintsy izany fomba izany.
Ohatra azo raisina amin’izany dia ny Â« RANOMAHERY Â» izay ampiasaina amin’ny famorana. Mifono hevi-dalina io izay tsy inona fa firarian-tsoa ilay zaza mba hanana tanjaka sy hery ho entiny miaina sy mivelona. Mba hahery an’ady , anatin’ny fianakaviana amin’ny lafiny soa rehetra ,â€¦ Fa raha sanatria ka io ranomahery io no tsy azo na tsy misy dia tsy ho azo soloina na afaka soloina Â« toaka mahery Â» na zavatra hafa mihintsy.
Araka izany dia azo lazaina fa Â« SAKAMALAO SY HAVOZO Â» ireo fitaovana rehetra ampiasaina amina fomba amam-panao ireo ; samy manana ny hevitra fonosiny avy ary ny fahabangan’ny iray amin’ireo dia mahasampona ny fomba , ka mahatonga azy tsy ho zarizary na tsy ho tanteraka mihintsy aza.
Ara-piforonan-teny , ny teny hoe Â« SOATOAVINA Â» dia avy amin’ny teny roa : soa + toavina . Ny teny hoe Â« SOA Â» dia misokajy mpamari-toetra , izany hoe misy toetran-javatra na endri-javatra faritany ao .Tenenina amin’ny filazam-potoana manana lafy roa Â« tsy ho avy Â» izy io , izany hoe ny efa lasa sy ny ankehitriny.
Fa raha ara-kevitra , ny soa dia midika fa tsara , meva , mendrika ,â€¦
Ny teny hoe Â« TOAVINA Â» kosa dia matoantenin’ny iharana avy amin’ny fototeny hoe Â« to Â» , izay midika hoe lalaina , ankasitrahina , ekena , mbola azo tanterahina.Lazaina amin’ny filazam-potoana telo lafy io , ka ny mariny eto dia ny âˆ…- izay mariky ny ankehitriny, mifamaly amin’ny no- Â« lasa Â» sy ny ho- Â« ho avy Â».
Araka ireo vahavahan-teny ireo no azo anolorana ny famaritana ara-bakiteny sy ara-kevitra araka izay fiheverana ny famaritana ny teny hoe : Â« Soatoavina Â».
Zavatra tsara , mendrika , meva hatramin’ny ela tsy voafaritra mandraka ankehitriny , ka mbola lalaina sy ekena ary ankasitrahan’ny ankamaroan’olona ( tanàna , faritra na firenena iray manontolo) sy mbola azo tanterahina no azo iheverana ny famaritana ny hoe Â« soatoavina Â».
Raha ara-pomba amam-panao dia ilay foto-pisainana sy foto-pahendrena nisy sy mbola misy ka ekena sy ankatoavin’ny besinimaro no atao hoe soatoavina. Izany hoe ny fitambaran’ireo fitaovana rehetra ilaina amina fomba amam-panao ireo no manome fototra iray hijoroana sy halain’ny taranaka amam-para tahaka.
Koa raha tsy misy intsony na very ireo fitaovana madinidinika izay mifono hevi-dalina ireo dia azo lazaina fa hanjavona tsikelikely/tanteraka koa ny fahendrena fototrana ny fomba tandrify azy , na lasa tantara fotsiny sisa.
Toy ny hazo ihany io , raha midoroboka ny hazo iray dia tsara fototra izy ary ireo rantsany hiroborobo hatrany. Fa raha tsy eo intsony ireo rantsany na mihamalazo izy ireo dia mety hiafara amin’ny fahafatesan’ilay hazo manontolo izany ,ka na ny fotony aza hihamaina ary afaka kelikely dia tsy ho hita intsony . Tantara sisa â€¦â€¦ Dia toy izany koa ny soatoavina ;rehefa tsy toavina intsony ny zavatra iray dia heverina ho olona adala , tsy maharaka toetrandro izay sisa manaraka azy io.Tsy maharaka toetrandro ,hono, satria efa tsy lamaody intsony , efa toron’ny riba hafa.
Ohatra azontsika anaporofoana izany dia fantatsika fa soatoavina , foto-pahendrena iray lehibe t/eo amin’ny Malagasy ny fanajana ny razana. Nokolokoloiny tokoa ny razana rehefa maty (saforan-damba , amonoana omby , avadika , tafiana lambamena izay mariky ny fanomezana voninahitra ambony ny razana sahala amin’ny filoham-pirenena amelarana ilay fanitsahana mena midorehitra ,izay mariky ny voninahiny ambony indrindra).
Ankehitriny anefa , noho ny TSY FANDALANA azy intsony (ho an’ny olona sasany) dia mihavery sy mihamanjavona ary dia tena maty io foto-pisainana manaja ny razana io , hany ka ny sisa manaraka dia hevrin’ny sasany ho manompo sampy ,sns â€¦
Concept and Design © Serasera.org: Eugene Hery RSSTel +39 338 744 2412 (Italie) Page rendered in 0.1654 seconds